Linux Mint haina kuziva USB zvishandiso | Kubva kuLinux
Linux Mint haizive madhizaikisi e USB
Dzimwe nguva (zvakangoitika kwandiri kamwe cheteLinux Mint haizive zvishandiso zve USB, kunyangwe tikabatana nenzira dzakasiyana kana muzviteshi zvakasiyana. Dambudziko iri dzimwe nguva rinokanganisa ma webcam edu asi mhinduro yacho iri nyore.
Usati wagadzira mhinduro yandiri kuzokupa, ndinokurudzira kuti iwe uende kuburikidza nechinyorwa Nzira shanu dzekuburitsa uye kubatanidza USB chishandiso pasina kubvisa maoko ako pane iyo keyboard kupi shamwari yedu gasparfm Anotsanangura zvakadzama mafambiro emidziyo yeUSB uye nzira dzekudzishandisa.
Mune yangu kesi iyo USB chishandiso yakamira kushanda mushure mekumisikidza uye nekuisa akasiyana madhiri pairi.
1 Kutarisa iyo USB
2 Kugadzira Linux Mint kuziva yangu USB chishandiso
Kutarisa iyo USB
Chinhu chekutanga chandakaita kana yangu USB kifaa ikamira kushanda kwaive kuona kuti inozivikanwa ne fdisk nayo sudo fdisk -l uye ini ndakaedzawo kubvaruka, asi hapana kana vaviri vacho vakaziva USB yangu.
Wobva washandisa lsusb chinova chishandiso chekuratidza ruzivo nezve emabhazi eUSB muhurongwa uye nemidziyo yakabatana navo, ndakakwanisa kuona kuti USB yangu yanga yakabatana, saka raisave dambudziko nemapini kana ndangariro.
Kugadzira Linux Mint kuziva yangu USB chishandiso
Maitiro ekugadzirisa dambudziko iro Linux Mint risingazive pendrive yangu, iri nyore uye yakapusa. Kuti uite izvi, tevera anotevera matanho:
Vhura terminal uye unomhanya unotevera kuraira
Tarisa ne sudo fdisk -l kuti yako USB ndangariro yakatokwidzwa uye ichishanda nemazvo.
Izvo zvinoita uyu murau uri nyore kutakura iyo "usb_storage" module mune kernel, iyo dzimwe nguva inomira kurodha
Ndinovimba kuti iyi mhinduro iri nyore inokutendera kuti ugadzirise dambudziko iri rinoshungurudza uye kuti iwe unogona kupa ako madivhidhi eUS ushandiswe hwakakodzera, yeuka kuti izvi zvinoshandawo kumamwe madhijisiti akadai semadhijitari kamera, mp3s pakati pevamwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Linux Mint haizive madhizaikisi e USB
Ndine michina yakawanda paLinux MInt kwemakore uye parizvino ine 18 na18.1 uye haina kuziva usbs zvachose, tarisa yako Hardware.
Luigys toro akadaro
Ini zvakare ndine akati wandei, muchinyorwa ini chandinotaura kuti zvakangoitika kwandiri kamwechete uye ipapo mhinduro yacho
Luigys, ndine urombo kana chirevo changu chikunetsa, chaisave chinangwa changu, kunyangwe zvaishamisa kuti handina kumboona kana kunzwa chero chinhu pamusoro pemutongo uyu, makorokoto pabasa rako, kubva pasi pemoyo wangu. Ndatenda.
Kutaurisa kwakanyanya uye kwakanaka. Inokosheswa zvikuru.
Vanhu vakaita sewe liven up foramu zvakanyanya.
Kunyangwe ini ndakasiiwa ndisina chokwadi, handizive kana IQ yako ichakupa kuti uone kuchema….
… .Unozvinzwisisa zvirinani kana ndikakuudza kuti mhando dzemashoko dzisingakoshi idhodhi chaiyo?
Mbavha haitendi here kuti zvese zviri pamamiriro ake ezvinhu? Pamwe dhongi ndiwe uye iwe unofunga kuti vese vari. Ini handina kutaura chero chinhu kunze kwenzvimbo, zvirinani kuti ndibvise iyo "enda", saka usatongere vamwe kana usina NPI. Ndatenda. Nenzira, yapfuura 55 tenda kwandiri mukomana, iwe unogona kukwanisa kuve sezvaunoda. Kana wakura unonzwisisa.
Mhoroi, chokwadi ndechekuti dzimwe nguva ndine dambudziko iro uye ndine komputa nyowani pandakaisa Linux Mint. Ndatenda zvikuru nekugovana.
Chokwadi iwe wakagadzirisa iyo kernel uye ndosaka isina kuziva iyo USB, reboot neiyo nyowani kernel uye kupera kwedambudziko.
Tarisa vamwe vatinoshanda navo vanoshandisa Ubuntu pamatafura avo. Chinhu chimwe chete ichi chakaitika kwaari - dzimwe nguva vaisaziva memory yeusb - uye pavakandibvunza, ndakavapindura kuti vatangise komputa uye ndizvozvo. Muna 99% vakagadzirisa. Zvinonyanya kunakisa kuzviita sekuratidzwa kwechinyorwa chakanaka naLuigys. Kana tisati taita lsmod | grep usb isu tinowana iyo runyorwa rweUSB ma module akatakurwa mukernel. Kana isu tikasaona iyo usb_kuchengetedza, saka kana tikachiisa sekutaura kwaLuigys na sudo modprobe usb-chengetedzo
Uye zve memori makadhi? Ndine nguva yakaoma kuti muverengi wemakadhi epakombiyuta ashande. Kana uchitangazve inoshanda kamwe asi kana ndikabvisa kadhi ndokuridzosera mariri harichashandi.
Neraki ini handishandisi Linux Mint, ini ndinoshandisa Debian 8 uye kumirira Debian 9, uye imwe mhinduro pachinzvimbo chekushandisa mirairo mune terminal kushandisa gnome-disk-utility, ini ndakambove nedambudziko iro muUbuntu uye ichi graphical chinoshandiswa chakagadziriswa dambudziko kwandiri. dambudziko. Kisimusi inofadza jojojojojojoooooo 🙂
tarisa magetsi akadaro
Izvi hazvina kuitika kwandiri, kuti uone kana uine dambudziko rekushaikwa kwesimba mukombuta yako.
Pindura kuti utarise magetsi
Pandaiverenga, ini ndaiwanzo kunge ndisina dambudziko iro, asi kwemazuva akati wandei pandinoitanga nependrive yakabatana inozviziva, ndobva ndaibvisa uye pandinoibatanidzazve haichazvioni uye ndinofanira kuitangazve.
Pindura ku luiscabest
Kunyangwe nemirairo iyoyo ini handikwanise kugadzirisa dambudziko
Ndibatsire kuisa linux mint, uye ikozvino haina kurira, uye haina kuziva usb. Zvandinogona kuita
Kwaziso, ndakaita zvakakurudzirwa muchipositi uye nanhasi haizive chishandiso, inobvuma pendrive asi haizive iyo yepasi-yekupedzisira foni.
Kana iwe uchizviziva, ndiregererewo. Inoonekwa mune koni zvakanyanya kana iwe unogona kuivhura kana kuimisikidza semodem, haina kuoneka mune yangu faira maneja
Zvinoitika kwandiri kazhinji, chete neSanDisk 3.1 Cruzer Extreme Pro pendrive uye chete mune USB 3.1 zviteshi. Paunenge uchipfuudza iyo USB 2.0 inogara ichizviziva, uye kana ndikaisa flash drive muna 3.1 inoshandawo. Iine modprobe usb-yekuchengetera inoshanda zvakare, asi pakupedzisira inopunzika zvakare. Icho chimwe cheaya anodzokororwa zvakavanzika pane yangu laptop.
Ndakanga ndazama zvinhu zvakasiyana uye hapana chakashanda. Izvi pakutanga zvakashanda zvakakwana. Kutenda kune iyo info!
Manuel Marques Robles akadaro
Chokwadi, yangu Linux Mint yakangoerekana yamira kuona zvese zvangu zvekunze hard drive uye yangu Usb pane ese madoko, uye kushandisa uyu murairo uye woitangazve iyo yakashanda senguva dzose zvakare, hapana chimwe chiito chaidikanwa. Ndatenda zvikuru nekugovana mhinduro inoshanda!
Pindura kuna Manuel Marques Robles
Tamba Chess paLinux nePyChess